वरिष्ठ अधिवक्ता « Image Khabar
प्रधानन्यायाधीशको सिट खालि भइसकेको छ : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
काठमाडौं, मंसिर १ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिट खालि भइसकेको बताउनुभएको छ । बुधवार नेपाल बार एसोसिएसनले गरको सर्वोच्च अदालतमा धर्नाको कार्यक्रम सकिएपछि एसोसिएसनको प्रांगणमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन
नेपालमा तीन किसिमका मान्छेले न्याय पाउँदैनन्– प्रा.डा. युवराज संग्रौला (भिडियो)
ईमेज टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘हट सिट’मा कुरा गर्दै डा. संग्रौलाले तीन किसिमका मान्छेले अहिले न्याय नपाउने बताउनुभयो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायधिवक्तामा खातीलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमिकस क्युरी खरेलको खरो बहसः ‘संसद् विघटन असंवैधानिक हो, कम्पन ल्याउन मन लागेको भए सदर गर्नुस्’
काठमाडौं, फागुन ५ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा एमिकस क्युरीका रुपमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै खरो बहस गर्नुभएको छ । लामो
विश्वलाई चकित पार्ने संविधानको बलपूर्वक व्याख्या सर्वोच्चबाट हुँदैन– वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले बलपूर्वक नभइ सरल र सहज तरिकाले संविधानको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा
प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने, संसद विघटन गर्ने होइन– वरिष्ठअधिवक्ता थापा
काठमाडौं, माघ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारनै नभएको जिकीर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा
थापाको व्यङ्ग्य– ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्षसँग बेग्लै संविधान रहेछ’
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधान निर्माणको क्रममा एउटा कुरा भन्ने र पछि आएर संविधानमाथि प्रहार गर्नु ठिक नभएको तर्क गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भइरहेको
वरिष्ठ अधिवक्ताको गरिमा कस्तो हुने ?
पृष्ठभूमीनेपालमा कानुन व्यवसायको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानुन मुलुकी ऐन, १९१० को अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. मा मुद्दाका जानकार तेस्रो पक्षसँग छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरी